अपरिहार्य भयो ओली सरकारको निर्गम :: NepalPlus
किशोर नेपाल२०७७ भदौ ५ गते १३:३६
त्यो समय अब सकिएको छ । कोरोना महामारीले देशका सबै गाउँ र नगरपालिका सोत्तर पारेको छ । धनगढी, नेपालगन्ज, बुटवल–भैरहवा, पोखरा, भरतपुर, बिरगन्ज, जनकपुर, राजबिराज र बिराटनगरजस्ता ठूला शहरको अवस्था नाजुक बनेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका तिन मुख्य शहर, काठमाडौ, पाटन र भक्तपुर तथा यहाँका दर्जन बढि नगरपालिकामा कोरोना संक्रमण दिन दुना रात चौगुनाको हिसाबले बढदै छ । जताततै हाहाकार छ । अस्पताल छैन । भएको अस्पतालमा बेड छैन । डाक्टर छैन । भेन्टिलेटर छैन । आइसोलेसनमा राख्ने समस्या छ । क्वारेन्टाइन छैन । काठमाडौंमा निषेधाज्ञा लगाइएकोछ । आफनो घर फर्किएका अथवा काठमाडौंमा ओखति उपचारको खोजीमा आएका जनता थानकोटबाटै फिर्ता हुन बाध्य पारिन्छन् । अत्यन्त दारुण अवस्थामा छन नेपाली जनता । जुन देशको राजधानीकै अवस्था यति बिभत्स छ त्यो देशका सुदूर पूर्व–पश्चिमका, दूर–दराजका, खोंच–कस्वाका, भीर–पहाडका, बिकट गाउँका जनता कसरी बाँचेका होलान ? कसैले अन्दाज गरेका होलान ? उता, दुवइ, कतार र अन्य शहरमा हप्तौंदेखि हवाइजहाज कुरेर बसेका सयौं हजार नेपालीको त के कुरा गर्नु र ?
अव, यिनलाई बिदा गर्नेबेला आएको छ । चीनले संकेत दिइसकेको छ । भारत र अमेरिकापनि प्रतिकूल नहोलान् । हामीसँग प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका पाँच दर्जन बढि सांसद छन् । जनता समाजवादी पार्टी पनि छ । सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै बन्ने हो । त्यहाँ जसले लूटेरा, हत्यारा, ज्यानमारा जे जे भने पनि प्रचण्ड छन् जसको नेतृत्वमा भएको जनयुध्द गणतन्त्र आगमनको मूल ढोका थियो । ओली नेतृत्वको सरकार बदलेर लूटतन्त्र नरोकेसम्म कोरोना महामारीसँग लड्न सकिँदैन । गरिवीसँग जुध्न सकिँदैन । यो सत्यलाई अंगीकार गरेर नेपालीको जीवन मूल्यको कदर गर्नु नै अबको सरकारको पहिलो काम हुनु पर्दछ ।